(1)DVD တွေကို Burn တဲ့အချိန်မှာ ကူးလို့မရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ|(2)CD/DVD Video Burn-Copy ကူးမရရင် ကူးရအောင် အဆင်ပြေအောင် ~ ITmanHOME
13:52 CD/DVDကူးမရအောင်|ကူးရအောင်, နည်းပညာ 1 comment
(1)DVD တွေကို Burn တဲ့အချိန်မှာ ကူးလို့မရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ|(2)CD/DVD Video Burn-Copy ကူးမရရင် ကူးရအောင် အဆင်ပြေအောင်
Credit to http://www.nayminmaung.info/2012/02/dvdfabpasskey8050.html
(2)CD/DVD Video Burn-Copy ကူးမရရင် ကူးရအောင် အဆင်ပြေအောင်
CD/DVD ကူးရင် အဆင်ပြေအောင်
ကျွန်တော် itmen blog ထဲက ဖတ်ပြီးလုပ်တာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်ဗျာ ဘာမှမတတ်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့တော့ အရမ်းဆင်ပြေတယ်
virus file ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကူးမရ ရွှေ့မရတဲ့ file တွေ့နဲ့တွေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် file error တတ်လဲ ဆက်ကူးပေးတယ်ဗျာ
window က ပါတဲ့ xcopy utility ကို command prompt ကနေသုံးနည်းတဲ့
ဒီလို ကျွန်တော်တို့ CD Drive က E ဆိုပါတော့။ Partation C , D , E ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
CD ခွေထဲကနေ hard disk (D:) ထဲကိုကူးမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့အရင်ဆုံးitmen ပြောသလို D: ထဲမှာ aquartz ဆိုတဲ့ folder လေးအရင်ဆောက်လိုက်တယ်ဗျာ
> Run box ကနေ cmd လို့ ရိုက်ပြီး Ms DOS cmmand pormpt ထဲကို ၀င်လိုက်ဗျာ။
>>E: ဆိုပြီး enter နှိပ်လိုက် ပြီးတော့
> xcopy /c /s *.* D:\_aquartz (ကြားထဲမှာ space တွေပါတယ်နော်) လို့ ရိုက် enter ခေါက်လိုက်ဗျာ။ တတ်နိုင်သလောက် သူအကုန်ကူးသွားတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပဲ ကော်ပီကူးရင်း ကော်ဖီဇိမ်နဲ့သောက်နိုင်ကြပါစေ~
ဥာဏ်ကောင်းသလို ဖန်တီးလို့ ရပါတယ် Nero7ကိုတော့ အတော်လေးသုံးဖြစ်ခဲ့တယ် နောက်ပေါ်လာတဲ့ Nero 8 Nero9 စုံနေတာပဲ အခွေလုပ်တာကဆော့ဝဲမသုံးလည်း BURN လို့ ရနေတာပဲ Window7 ဆိုလည်း အလိုလိုပါနေပီးသာ Window DVD Maker လည်းကောင်းပါတယ် သူက VCD တော့မရဘူး အခုတင်ပေးလိုက်တာက အစုံတော့ရတယ် Nero လောက်တော့ မကောင်းဘူး Nero က Photo Slide Show တွေဘာတွေ လုပ်ရတာ အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စုံအောင် လေ့လာထားဖို့အခြေခံပညာသင် ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
thein tin says:
7 March 2013 at 01:04 Reply